Orange France သည် Viaccess-Orca ၏ Voyage Solution ဖြင့် Multiscreen ချိတ်ဆက်ထားသောပလက်ဖောင်းကိုဖြန့်ကျက်သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » လိမ္မော်ရောင်ပြင်သစ် Viaccess-Orcas ရဲ့ Voyages ဖြေရှင်းချက်နဲ့အတူ Multiscreen ချိတ်ဆက်ပလက်ဖောင်းဖြန့်ချထား
လိမ္မော်ရောင်ပြင်သစ် Viaccess-Orcas ရဲ့ Voyages ဖြေရှင်းချက်နဲ့အတူ Multiscreen ချိတ်ဆက်ပလက်ဖောင်းဖြန့်ချထား
Capgemini Technologies ကအတူပေါင်းလိုက်သော Viaccess-Orcas ရဲ့တီဗီနေရာတိုင်းမှာဖြေရှင်းနည်း, 23 သန်းပြင်သစ်စာရင်းပေးသွင်းထားသူများမှညျ့ဝ Multiscreen အတွေ့အကြုံပေးဖို့လိမ္မော်ရောင် Enable
ပဲရစ် - ဖေဖော်ဝါရီလ 27, 2015 - တီဗီနေရာတိုင်းမှာဖြေရှင်းချက် - Viaccess-Orcas, အကြောင်းအရာန်ဆောင်မှုများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်တိုးမြှင့်အတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်, လိမ္မော်ရောင်, တစ်ဦးဦးဆောင်ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာကုမ္ပဏီရဲ့ Voyages အသုံးပြု. ပြင်သစ်တွင်တစ်ဦး OTT multiscreen ဝန်ဆောင်မှုတွေစတင်ပေးခဲ့ပါတယ်ယနေ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည် , စနစ်များကိုပေါင်းစပ်နှင့် Capgemini ပေးနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုန်ဆောင်မှုများနှင့်အတူ။ Viaccess-Orcas ရဲ့ Voyages ဖြေရှင်းချက်၏စိတ်နှလုံးမှာ RiGHTv စုစည်းဝန်ဆောင်မှုပေးအပ်ခြင်းပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါတယ်။ အလွန်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်စိတ်ကြိုက်နှင့်အရွယ်မှာဖြေရှင်းချက်အဖြစ်အမျိုးမျိုးသော Third-party စနစ်များနှင့်အတူလွယ်ကူသောပေါင်းစည်းမှုကမ်းလှမ်းတဲ့ဝန်ဆောင်မှုပလက်ဖောင်းနှင့်အတူလိမ္မော်ရောင်ပြင်သစ်ပေးခွငျးအားဖွငျ့, RiGHTv တိုက်ရိုက်ရုပ်မြင်သံကြားအပါအဝင်အကြောင်းအရာန်ဆောင်မှုများ၏ကျယ်ပြန့်မကယ်မလွှတ်မှ service provider ကဖွ, ဗွီဒီယို ဝယ်လိုအား--on နှင့်ဖမ်း-up, တီဗီ, ဆို OTT screen ပေါ်မှာ 23 သန်းစာရင်းသွင်းသူ၎င်း၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်ကုန်ကျစရိတ်လျှော့ချနေစဉ်။
"သင်တဲ့ subscribers, မျိုးစုံ device ကိုအမျိုးအစားများနှင့်အလွန်အမင်းရှုပ်ထွေးဂေဟစနစ်, ရိုးရှင်းခြင်းနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အတွက်ပစ္စည်းကိရိယာများအမျိုးမျိုးသန်းပေါင်းများစွာနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်အခါနှစ်ဦးစလုံးမရှိမဖြစ်နေကြတယ်" ဟု Emmanuel Bidet, DTRS, လိမ္မော်ရောင်၏အကြီးတန်းဒုတိယဥက္ကဋ္ဌကပြောကြားသည်။ "ဟာသူ့ရဲ့အဓိကအဖြစ် RiGHTv နှင့်အတူ Viaccess-Orcas ရဲ့ Voyages ဖြေရှင်းချက်, သိသိသာသာတစ်ခုတည်းစုစည်းပလက်ဖောင်းနှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောအမွေဝန်ဆောင်မှုပလက်ဖောင်းကနေအကူးအပြောင်းလွယ်ကူချောမွေ့ခြင်းဖြင့် OTT multiscreen ပေးပို့ streamlines ။ "
RiGHTv နှင့်အတူ, လိမ္မော်ရောင်ပုံမှန်အား OTT multiscreen ပေးပို့နှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်ရှုပ်ထွေးဖျက်သိမ်းရေး, အကြောင်းအရာ, သုံးစွဲသူများနှင့်တစ်ခုတည်းပလက်ဖောင်းကနေအားလုံး devices များ (စမတ်ဖုန်း, တက်ဘလက်, PC များနှင့် game consoles စ) အတွက်ဝန်ဆောင်မှုစီမံနိုင်သည်။ စညျးလုံးဝန်ဆောင်မှုပေးအပ်ခြင်းအားဖြင့်, အ Viaccess-Orcas ပလက်ဖောင်းယခုအသစ်တခုအမှုလေ့လာမှုရရှိနိုင်အွန်လိုင်းအတွက်သရုပ်ပြအဖြစ်ပိုမို device ကိုအမျိုးအစားများကိုထောကျပံ့မှုကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချ, လုပ်ငန်းလည်ပတ်ထိရောက်စွာတိုးမြှင့်, အလျင်အမြန်သည်၎င်း၏ service ကိုပူဇော်သက္ကာကိုချဲ့ထွင်ရန်လိမ္မော်ရောင်နိုင်ပါတယ်။ intensive metrology စမ်းသပ်မှု RiGHTv မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်ဗီဒီယို၏စားသုံးမှုသိသိသာသာကြီးထွားရန်မျှော်လင့်ကြောင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားအရေးကြီးသောအရာလိမ္မော်ရောင်ရဲ့လက်ရှိနဲ့အနာဂတ်အသွားအလာ, ထောက်ပံ့နိုင်စွမ်းကြောင်းအတည်ပြုပါ။
"OTT ကစားသမားရောက်ရှိလာမှုနှင့်အတူအားလုံးအော်ပရေတာကသူတို့ပလက်ဖောင်း rationalizing နှင့်မျိုးစုံကိရိယာများပေါ်တွင်အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုတိုးတက်အောင်၏စည်းကမ်းချက်များ၌တူညီသောစိန်ခေါ်မှုများနှင့်ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်" ဟု Arnaud Demesse, Capgemini မှာဆက်သွယ်ရေးနှင့်မီဒီယာဒါရိုက်တာကဆိုသည်။ "Viaccess-Orcas သည်ဤလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းတီထွင်ခဲ့သည်။ Viaccess-Orcas နှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့၏မိတ်ဖက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အော်ပရေတာများအတွက် OTT multiscreen ပေးပို့ပိုကောင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုပါတယ်။ "
သစ်ကိုဖြန့်ဝေပလက်ဖောင်းများအတွက်လိမ္မော်ရောင်ပြင်သစ်ရဲ့သော့ချက်လိုအပ်ချက်တစ်ခုမှာ Third-party အစိတ်အပိုင်းများနှင့်အတူလွယ်ကူသောပေါင်းစည်းမှုဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ OTT multiscreen ဝန်ဆောင်မှုကြော်ငြာ, content တွေကိုပြင်ဆင်မှုနှင့်စစ်မှန်ကြောင်းအထောက်အထားပြသခြင်းအပါအဝင် 20 Third-party အစိတ်အပိုင်းများ, ကျော်အားဖြင့် powered ဖြစ်ပါတယ်။ RiGHTv ထောက်ခံပါတယ်နှင့်ဖြန့်ကျက်မှုလုပ်ငန်းစဉ် simplifying ထိုကဲ့သို့သောဗီဒီယိုကဆာဗာများ, ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာများ, ခြွင်းချက်လက်လှမ်းနှင့် DRM စနစ်များအဖြစ် Third-party ပစ္စည်းကိရိယာများ၏ကျယ်ပြန့, နဲ့ပေါင်းစပ်ပြီး။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, RiGHTv လျှင်မြန်စွာ, ဖွံ့ဖြိုးအကောင်အထည်ဖော်ရန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုအသစ်များမိတ်ဆက်လိမ္မော်ရောင်နိုင်ပါတယ်တဲ့အဆင့်မြင့်ဆော့ဖ်ဝဲကိုဖှံ့ဖွိုးတိုးတကိရိယာအစုံအပါအဝင်ကြွယ်ဝအင်္ဂါရပ်အစုံနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဗိသုကာ, ပေးထားပါတယ်။ API များနှင့် plug-in ကိုအခြေစိုက်ပြင်ပ interfaces များ၏ပလက်ဖောင်းရဲ့အပြည့်စုံအစုံကတဆင့်, လိမ္မော်ရောင်စာရင်းသွင်းသူအတွေ့အကြုံ၏တစ်ဦးထက်သာလွန်အရည်အသွေးကိုသေချာ၎င်း၏ multiscreen ဝန်ဆောင်မှုများ၏ဒီဇိုင်း, ဖြန့်ကျက်ခြင်း, စစ်ဆင်ရေးကျော်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နှင့်ထိန်းချုပ်မှုတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ အနာဂတျမှာ, လိမ္မော်ရောင် PC များပေါ်တွင်ဖမ်း-up, တီဗီပူဇော်သက္ကာကိုချဲ့ရန် RiGHTv ၏အသုံးပြုမှုကိုတိုးချဲ့ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။
"လိမ္မော်ရောင်ပြင်သစ် Viaccess-Orcas တစ်ဦးသက်တမ်းကြာဖောက်သည်ဖြစ်ပါတယ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Voyages ဖြေရှင်းချက်နှင့် RiGHTv စုစည်းဝန်ဆောင်မှုပလက်ဖောင်းနှင့်အတူရရှိခဲ့နိုင်ကုန်ကျစရိတ်ငွေစုနှင့်ထိရောက်စွာ၏ပထမဦးဆုံးလက်အတွေ့အကြုံကိုရှိပါတယ်" ဟုသူ Francois Moreau က de Saint မာတင်, Viaccess- မှာ CEO ဖြစ်သူကပြောပါတယ် Orcas ။ "ကျနော်တို့အားလုံးဖြန့်ဖြူးကွန်ယက်ကိုဖြတ်ပြီးအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုစညျးလုံးကိုထပ်လိမ္မော်ရောင်ပြင်သစ်နှင့်အတူပူးပေါင်းဝမ်းသာပါတယ်။ OTT န်ဆောင်မှုတစ်ခု convergence ဝန်ဆောင်မှုပေးအပ်ခြင်းပလက်ဖောင်းရှိခြင်းလိမ္မော်ရောင်အဘို့အအကျိုးရှိပါလိမ့်မည်, စားသုံးသူများ၏အာရုံစူးစိုက်မှုကိုရရှိဆက်လက်အဖြစ်။ "
Insights: VO စွမ်းအားဖြင့်လိမ္မော်ရောင်များထားရှိအကြောင်းကိုပိုမိုသိရှိလိုပါကရရှိရန်, တစ်ဦးအမှုလေ့လာမှုယခုမှာရရှိနိုင် www.viaccess-orca.com/3dissue/orangecasestudy/index.html ။ ဤကိစ္စတွင်လေ့လာမှု Viaccess-Orcas ကမ္ဘာတဝှမ်းအမျိုးမျိုးသောစီမံကိန်းများတွင်လိမ္မော်ရောင်ထောက်ပံ့နေသည်ဘယ်လိုတင်ဆက်ပေးတယ်။
လိမ္မော်ရောင်ပြင်သစ်တွင် 39 2014 န်ထမ်းများအပါအဝင်ဒီဇင်ဘာ 156,000, 31 ၏အဖြစ်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း 2014 နှင့် 99 န်ထမ်းအတွက် 400 ဘီလီယံယူရို၏အရောင်းနှင့်အတူကမ္ဘာ့ဦးဆောင်ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာများ၏တဦးတည်းဖြစ်၏။ 29 နိုင်ငံများရှိပစ္စုပ္ပန်, အုပ်စု 244 သန်းမိုဘိုင်းဖောက်သည်များနှင့် 31 သန်း fixed ဘရော့ဘန်းဖောက်သည်အပါအဝင်ဒီဇင်ဘာ 2014, 185 ၏အဖြစ်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း 16 သန်းဖောက်သည်တစ်ဦးစုစုပေါင်းဖောက်သည်အခြေစိုက်စခန်းရှိပါတယ်။ လိမ္မော်ရောင်တံဆိပ်လိမ္မော်ရောင်စီးပွားရေးန်ဆောင်မှုများအောက်တွင်လည်းနိုင်ငံစုံကုမ္ပဏီများအဖို့တစ်ကမ္ဘာလုံးအိုင်တီနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုများကိုတစ်ဦးဦးဆောင်ပေးသူဖြစ်ပါတယ်။
လိမ္မော်ရောင်ဟာ NYSE Euronext ပဲရစ် (သင်္ကေတ ORA) နှင့်နယူးယောက်စတော့အိတ်ချိန်း (သင်္ကေတ ORAN) ရက်နေ့တွင်စာရင်းဖြစ်ပါတယ်။
အင်တာနက်ပေါ်မှာနှင့်သင့်မိုဘိုင်းအပေါ်ပိုမိုသိရှိလိုပါက: www.orange.com, www.orange-business.com, www.livetv.orange.com သို့မဟုတ် Twitter ပေါ်တွင်ကျွန်တော်တို့ကိုလိုကျနာဖို့: @orangegrouppr ။
လိမ္မော်ရောင်နှင့်အခြားလိမ္မော်ရောင်ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုအမည်များကိုဒီပစ္စည်းတွင်ထည့်သွင်းလိမ္မော်ရောင်သို့မဟုတ်လိမ္မော်ရောင်အမှတ်တံဆိပ်န်ဆောင်မှုများ Limited ၏အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ကြသည်။
အကြောင်းအရာကာကွယ်မှု, ဖြန့်ဝေခြင်း, ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုဖြေရှင်းချက်၏ဦးဆောင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပံ့ပိုးပေးသူအဖြစ်, Viaccess-Orcas အဆုံးစွန်သောအကြောင်းအရာများကိုအတွေ့အကြုံကိုပုံဖော်နေပါတယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအကြောင်းနားလည်တဲ့ထုတ်ကုန်များနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများ၎င်း၏ဘက်ပေါင်းစုံအကွာအဝေးမှတဆင့် Viaccess-Orcas, cable ကိုအတွက် DTT ဝန်ဆောင်မှုပေးကူညီပေးသည်, ဂြိုဟ်တု, IPTVနှင့် OTT စက်မှုလုပ်ငန်းဒီနေ့ရဲ့လျင်မြန်စွာပြောင်းလဲ multiscreen ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ယှဉ်ပြိုင်မှုအစွန်းရဖို့။ လုံလုံခြုံခြုံမဆို device ကိုတခုတခုအပေါ်မှာဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုကယ်လွှတ်ခြင်းငှါဝန်ဆောင်မှုပေးဖွင့်ခြင်းအားဖြင့်, Viaccess-Orcas ဖျော်ဖြေရေးရှုခင်း reinventing ဖြစ်ပါတယ်။ Viaccess-Orcas သည့်လိမ္မော်ရောင် Group ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, ခရီးစဉ် www.viaccess-orca.com သို့မဟုတ်တွစ်တာ @ViaccessOrca နှင့် LinkedIn တို့အပေါ်ကုမ္ပဏီအတိုင်းလိုက်နာ www.linkedin.com/company/viaccess-orca.
အကြောင်းအရာ လိမ္မော်သီး post ကိုထုတ်လုပ်မှု စနစ်များကိုပေါင်းစပ် နေရာတိုင်းမှာတီဗီ Viaccess-Orcas 2015-02-27
ယခင်: ဆက်သွယ်ရေးမြင်ယောင်ကြည့်ပါ - အ 2015 NAB ပြရန်အဘို့ကြီးသော
နောက်တစ်ခု: 2015 NAB Show ကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်း #NABShow